Rehab Ṅara Ntị n’Akụkọ A Kọọrọ Ya | Kụziere Ụmụ Gị Ihe
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
KA E were ya na ugbu a bụ ihe dị ka puku afọ atọ na narị afọ ise gara aga, na anyị bi n’obodo Jeriko nke dị n’ala Kenan. Otu nwata nwaanyị aha ya bụ Rehab bi n’obodo a. A mụrụ ya mgbe Mozis dupụtachara ụmụ Izrel n’ebe ha nọ na-agba ohu n’Ijipt, durukwa ha gafee Oké Osimiri Uhie n’ala akọrọ! E nweghị redio, televishọn, ma ọ bụ Ịntanet, ma Rehab nụrụ banyere ọrụ ebube a n’agbanyeghị na ebe o mere dị anya n’ebe o bi. Ị̀ maara otú o si nụ ya?— *
O doro anya na ọ bụ ndị njem kọọrọ ndị mmadụ akụkọ ọrụ ebube ndị a. Mgbe Rehab tolitere, o chetara ihe Jehova meere ndị ya. Ọ nụkwara ihe ndị ọzọ na-atụ n’anya banyere ụmụ Izrel. Ha anọchaala afọ iri anọ n’ala ịkpa, batazie n’ala Kenan, Chineke na-enyekwara ha aka imeri ndị ọ bụla na-emegide ha. Ugbu a, Rehab nụrụ na ụmụ Izrel mara ụlọikwuu n’ofe nke ọzọ nke Osimiri Jọdan, n’ebe na-adịghị anya na Jeriko!
Otu mgbede, ndị ọbịa abụọ bịakwutere Rehab n’ihi na ha maara na ọ na-arụ ọrụ n’ebe ndị ọbịa nwere ike ịnọ. Ọ kpọbatara ha. N’abalị ahụ, eze Jeriko nụrụ na ndị nledo si Izrel batara na Jeriko nakwa na ha gara n’ụlọ ebe Rehab na-arụ ọrụ. N’ihi ya, eze zipụrụ ndị ozi ya ka ha gakwuru Rehab, gwa ya ka ọ kpọpụta ndị ahụ bịara na nke ya. Ị̀ maara ihe Rehab matarala na ihe o meziri?—
Tupu ndị ozi ahụ eze zipụrụ erute, Rehab amatala na ndị ọbịa ya ahụ bụ ndị nledo si Izrel. N’ihi ya, Rehab zoro ha n’uko ụlọ ya, gwazie ndị ozi ahụ eze zitere, sị: “N’ezie, ndị ikom ahụ bịakwutere m . . . O wee ruo na mgbe chi jiwere, mgbe a chọrọ imechi ọnụ ụzọ ámá, ndị ikom ahụ pụrụ.” Rehab gwara ha, sị: “Chụwanụ ha.”
Gịnị ka i chere mere Rehab ji chebe ndị nledo ahụ?— Ọ kọwara ihe mere o ji mee ya, ọ gwara ha, sị: “Amaara m na Jehova ga-enye unu ala a . . . N’ihi na anyị anụwo otú Jehova si mee ka mmiri Oké Osimiri Uhie takọọ n’ihu unu mgbe unu si n’Ijipt pụta.” Ọ nụkwala otú Chineke si mee ka ndị Izrel merie ndị iro ha ndị ọzọ.
Ihe Baịbụl gwara anyị ná Ndị Hibru 11:31 gosiri na nchebe Rehab chebere ndị nledo ahụ mere nnọọ Jehova obi ụtọ. Obi tọkwara Jehova ụtọ mgbe Rehab rịọrọ ndị nledo ahụ arịrịọ, sị: ‘Emeere m unu ebere, n’ihi ya, biko kwenụ m nkwa na unu ga-azọpụta papa m na mama m na ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwaanyị mgbe unu ga-emeri Jeriko.’ Ndị nledo ahụ kwetara ime otú ahụ ma ọ bụrụ na Rehab emee ihe ha gwara ya. Ị̀ maara ihe ha gwara ya mee?—
Ndị nledo ahụ gwara ya, sị: ‘Were eriri uhie a kegide na windo gi, kpọkọtakwa ndị ikwu gị niile n’ime ụlọ gị. Ọ bụrụ na i mee otú a, ọ dịghị ihe ga-eme onye ọ bụla n’ime unu.’ Rehab mere nnọọ ihe ahụ ndị nledo ahụ gwara ya. Ị̀ maara ihe mezirinụ?—
Ụmụ Izrel rutere n’azụ mgbidi Jeriko. Ha gbara obodo ahụ gburugburu otu ugboro kwa ụbọchị ruo abalị isii n’ekwughị okwu ọ bụla. N’ụbọchị nke asaa, ha gbara ya gburugburu ugboro asaa, tizie oké mkpu. Mgbidi ahụ dara, ma e wezụga ebe ahụ e kegidere eriri uhie na windo! A zọpụtara Rehab na ezinụlọ ya.—Jọshụa 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25.
Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n’ihe a Rehab mere?— Ọ bụghị naanị na ọ ṅara ntị n’akụkọ ihe ndị Chineke nọ na-eme iji chebe ndị ya, kamakwa o nyeere ha aka mgbe o nwere ohere ime otú ahụ. N’ezie, Rehab họọrọ iso ndị Jehova fee ya! Ị̀ ga-eme otú ahụ?— Anyị nwere olileanya na ị ga-eme ya.
Olee akụkọ dị mkpa Rehab nụrụ mgbe ọ ka dị obere?
Olee otú o si mesoo ndị nledo ahụ si Izrel, ọ̀ bụkwa n’ihi gịnị?
Olee nkwa Rehab mere ka ndị nledo ahụ kwe ya?
Olee otú anyị si mara na ihe Rehab mere dị Jehova mma, oleekwa otú i nwere ike isi dị ka ya?
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE Ọgọst 2009